Ogaden News Agency (ONA) – Eritrea oo dib uga mid noqotay IGAD
Eritrea oo dib uga mid noqotay IGAD
Warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Eritrea ayaa lagu sheegay in ay dowladda dalkaasi ay dib uga mid noqotay urur goboleedka IGAD, oo ay ka baxday afar sano ka hor.
Eritrea ayaa IGAD ka baxay iyadoo ka biyo diidday waqtigaasi in ururka uu ku guuldarraysatay in uu ciidamada Itoobiya oo xilligaasi ku sugnaa Soomaaliya ka saaro.
Warqad ka timid xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea, Osman Saleh oo loo soo diray xoghayaha guud ee ururka IGAD ayaa lagu sheegay in ay Eritrea ku faraxsan tahay in ay mar kale dib u soo noqoto urur goboleedka IGAD.
Sharciga IGAD ayaa qoraya in waddamada xubnaha ka ah ay ururka ka bixi karaan, kuna soo noqon karaan, iyadoo ay Eritrea tahay dalka keliya ee arrintaasi sameeyay.
Itobiya ayaa fursad u heshay intii ay ka maqnayd Eritrea urur goboleedka inay ku shaqaysato ururkaa oo waxyaaba badan oo lid ku ah dalka Eritrea ka saxiixatay, waxaana ugu dambeeyay qoraalka ay sida wadajirka ah ugu qoreen dalalka ku jira Igad Qaramada Midoobay ay ku eedeynayeen Ertirea inay ka dambaysay fal ay sheegatay Itobiya in la maaganaa in lagu qarxiyo shirkii Midowga Afrika ee ka socday Addisababa. Sidoo kale IGAD ayaa u noqday Itobiya shaabad ay ka saxiixato wax kastoo lid ku ahaa dalka Eritrea.
Ku soo noqoshada dalka Eritrea urur goboleedka IGAD ayaa la filayaa inuu wax weyn ka badali doono qorshihii Itobiya iyadoo xeerka ururka uu dhigayo in go’anada ay ahaadaan mid loo wada dhanyahay suu u ansaxo.
Eritrea way ku sugtay, maaha wayanaha in looga tago meelahan oo kale oo suu doono uu ka yeelo, Eritrea waa dawladda kaliya ee go`aan xor ah leh oo ku jirta ururkan waagii hore loo sameeyey la dagaalanka ayaxa, kadibna siyaasadda loo adeegsadey, dawladaha kale oo dhan wayaanaha ayay daba dhilif u yihiin ! waa la yaab,